Fanamafisana ny fitantanana - Suzhou Bricmaker Automation Co., Ltd.
Ny mpanjifa dia tsy mila misafidy mpamatsy fitaovana azo antoka, teknolojia matanjaka, serivisy aorian'ny fivarotana tanteraka ary fifanakalozana serivisy ara-teknika mahazatra. Ny tena zava-dehibe dia ny fametrahana ny fitantanana azy ireo hanamafisana ny fahatsiarovan-tena amin'ny fitantanana, ny fizakan-tena.
Hamafiso ny fitantanana ny fitaovana mba hiantohana ny fiasa ara-dalàna ny fitaovana, ny fanatsarana ny fampiasana fitaovana ary ny tahan'ny fahalavorariana, izany dia hanatsara hatrany ireo tondro ara-teknika sy ara-toekarena ataon'ny orinasa, hampitombo ny fahombiazan'ny toekarena.
Hamafiso ny vola lany amin'ny fitantanana angona, ny akora, ny fanjifana angovo, ny karama, ny fitaovana, ny hetra ary ny angona hafa momba ny kaonty, ny fifehezana, ny fitantanana.
1.Araka ny fampiasana ny masontsivana sy ny boky fiasa miasa, fampiasana fitaovana mitombina, mandrara ny fampiasana be loatra.
2.Manome lanja lehibe ny fiofanana alohan'ny asa, fifanakalozana amin'ireo mpamatsy, manomboka amin'ny tsy fahalalana ka hatramin'ny fahatakarana ary manao asa tsara amin'ny fikojakojana ny fitaovana isan'andro.
3.Manao fenitry ny rafitry ny orinasa, mifehy ny fitondran-tenan'ny mpiasa, alao antoka fa ny fitohizan'ny asa famokarana sy ny asa.
4.Manazava ny iraka ataon'ny orinasa, mamolavola vina orinasa, mametraka kolontsaina orinasa, mampivelatra ny paikadin'ny orinasa.
Mahazo tombony ny fitantanana
Tanjona fitantanana: Orinasa mikatsaka androm-piainana lava & matanjaka kokoa, fa tsy ny habe aminy. Ataovy mivoatra hatrany ny orinasa.
Iraka ataon'ny orinasa: Manolotra fitaovana avo lenta avo lenta sy vahaolana teknolojia ho anao i Bricmaker, hanampiana anao hahazo tombony ara-toekarena lehibe kokoa ary hahatsapa ny lanjan ny fiainanao manokana!